यदि वायु र वर्षा झैँ यताउता बहिरहने, तेरोअस्थिर स्वभाव छ भने, अनि सम्पूर्ण शक्तिसाथ लगातार अघि बढ्न असमर्थ छस् भने, तब मेरो डन्डा कहिले पनि तँबाट टाढा हुनेछैन। निराकरण गरिदैँ गर्दा, जति बढी परिवेश प्रतिकूल बन्छ अनि तँ जति बढी प्रताडित हुन्छस्, परमेश्‍वरप्रतिको तेरो प्रेम त्यति बढ्दै जान्छ अनि तँ संसारसँग टाँसिन छोड्नेछस्। अघि बढ्ने अर्को विकल्पविनै तँ मकहाँ आउनेछस् अनि तेरो शक्ति र विश्‍वास पुन: प्राप्त गर्नेछस्। जे भए तापनि, सहज वातावरणहरूमा, तैँले गडबडी गर्नेछस्। तैँले सकारात्मकताको पक्षबाट प्रवेश गर्नुपर्छ; सक्रिय होऊ, निष्क्रिय होइन। तँ कुनै पनि परिस्थितिहरूमा, कुनै पनि व्यक्ति वा वस्तुबाट अस्थिर हुनुहँदैन अनि तँ कसैको बोलीबाट प्रभावित हुनुहुँदैन। तँसँग स्थिर स्वभाव हुनुपर्द्छ; मानिसहरूले जेसुकै भने तापनि तैँले जे सत्य हो भनी जान्दछस्, त्यसलाई झट्टै व्यवहारमा उतार्नु पर्छ। कामको बेला सधैँ मेरा वचन तेरो मनभित्र हुनुपर्छ, तँ जोसुकैसँग सम्मुखिन हुनुपरे तापनि, मप्रतिको आफ्नो साक्षीमा तँ दृढ हुनुपर्छ अनि मेरा बोझहरूप्रति सोच-विचार राख्नुपर्छ। मानिसहरूको कुरामा अन्धाधुन्ध सहमति दिँदै, आफ्नो धारणा नराखी तँ अलमल्ल हुनुहुदैन, बरु मबाट नआएका ती कुराहरूको निम्ति तँसँग खडा हुने र विरोध गर्ने आँट हुनुपर्छ। यदि कुनै कुरा गलत छ भन्ने तँलाई प्रष्ट थाहा छ, तर पनि तँ चुप लागेर नै बस्छस् भने, तब सत्यलाई अभ्यासमा ल्याउने व्यक्ति तँ होइनस्। यदि केही कुरा गलत छ भन्ने तँजान्दछ, तर उक्त विषयलाई फनक्कै बंग्याउछस् अनि शैतानले रोक्दछ जसले कुनै असर विना बोल्न लगाउँछ अनि अन्तसम्मै दृढ रहन नसक्ने बनाई बाधा सृजना गर्छ भने, तब यसको अर्थ तँ आफ्नो हृदयमा अझै पनि भय बोक्छस् भन्ने बुझिन्छ। त्यसो भए के यो तेरो हृदय अझै शैतानको विचारहरूले भरेको छ भन्ने होइन?
विजेता के हो? आत्मिक रूपमा बलियो बन्न ख्रीष्टका असल सेनाहरू साहसी हुनु र ममा भर पर्नु जरुरी छ; तिनीहरूले योद्धाहरू हुन र शैतानलाई मृत्युसम्मै युद्ध गर्न संग्राम गर्नु पर्छ। तँ सधैँ जागा रहनु पर्छ, अनि यसैकारण मसँग सक्रिय रूपमा प्रत्येक क्षण सहकार्य गर्न अनि मेरो नजिक आउन सिक्नलाई म भन्दछु। यदि, कुनै पनि समयमा र कुनै पनि अवस्थामा, मेरो वक्तव्य सुन्दै अनि मेरा वचनहरू र कामहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै चुपचाप बस्न सक्छस्भने, तँ बहकिने अनि आफ्नो पकड हराउने छैनस्। मभित्रबाट प्राप्त गरेका कुनै पनि कुरालाई अभ्यास गर्न सकिन्छ। मेरा प्रत्येक वचनहरू तेरो अवस्थातिर निर्देशित छन् अनि तिनीहरूले तिम्रो हृदय छेड्छन्। तैँले मौखिक रुपमा तिनीहरूलाई इन्कार गर्छस् भने पनि, तेरो हृदयबाट तिनीहरूलाई इन्कार गर्न सक्दैनस्। अझै, यदि तैँले मेरा वचनहरूको विश्लेषण गर्छस् भने, तेरो न्याय हुनेछ। अर्थात्, मेरा वचनहरू सत्य, जीवन अनि बाटो हुन्; तिनीहरू धारिलो, दुइधारे तरवार हुन् अनि तिनीहरूले शैतानलाई हराउनेछन्। जसले मेरा वचनहरू बुझ्छन् अनि व्यवहारमा ल्याउने मार्ग राख्छन्, तिनीहरू धन्यका हुन्, अनि तिनीहरू, जसले यी अभ्यास गर्दैनन्, तिनीहरूको नि:सन्देह् न्याय गरिनेछन्; यो अति ज्यादै व्यवहारिक छ। यी दिनहरूमा, जसको म न्याय गर्दछु, तिनीहरूको परिधि विस्तृत भएको छ; मलाई चिन्नेहरूको मात्र होइन, तर मलाई विश्‍वास नगर्नेहरू अनि पवित्र आत्माका कार्यहरूलाई प्रतिरोध गर्न र बाधा दिन हरेक प्रकारका प्रयास गर्नेहरूको पनि न्याय गरिनेछन्। मेरा अघि भएका तिनीहरू सबै, जसले मेरा पाइलाहरू पछ्याउँछन्, उनीहरूले परमेश्‍वर क्रोधाग्नि हुन् भन्ने देख्नेछन्! परमेश्‍वर प्रताप हुनुहुन्छ! उहाँले आफ्नो न्याय लागु गराउनुहुँदैछ अनि तिनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिनुहुँदैछ। पवित्र आत्माका कामलाई पालन गर्न ध्यान नदिने ती काममा बाधा देखावटी गर्ने अनुचित अभिप्रायहरू अनि उद्देश्यहरू हुने परमेश्‍वरको वचनहरू खान र पिउन कुनै प्रयास नगर्ने मगज-गडबड भएका र शंकालु हुने पवित्र आत्माको काम जाँच गर्ने मण्डलीका मानिसहरू—ती मानिसहरूमा कुनै पनि समय परमेश्‍वरको न्यायको वचनहरू आउनेछ। मानिसहरूका सबै कार्यहरू प्रकट गरिनेछन्। पवित्र आत्माले मानिसहरूका आन्तरिक हृदयहरूको खोजतलास गर्नुहुन्छ, यसकारण मूर्ख नहो; होशियार र सतर्क बन्। तँ आफैले अन्धाधुन्ध काम नगर्। यदि तेरा कामहरू मेरा वचन अनुसार छैनन् भने, तब तेरो न्याय हुनेछ। यसैले नक्कल गर्नु, विशिष्ट हुनु, वा साच्चैँ नै नबुझ्नु मिल्दैन; तँ म सामु आउनु अनि मसँग बारम्बार सम्पर्कमा रहनु नै पर्छ।
म भित्रबाट तैँले जे पनि लिन्छस् तँलाई अभ्यास गर्ने मार्ग दिइनेछ। तँलाई मेरो सामर्थ्यद्वारा साथ दिइनेछ, मेरो उपस्थिति हुनेछ, अनि सधैँ मेरो वचनहरूमा हिँड्नेछस्; तैँले सबै सांसारिक कुराहरू उछिनेछस् अनि पुनरुत्थानको शक्ति प्राप्त गर्नेछस्। यदि तँमा मेरा वचनहरू छैनन् अनि मेरो उपस्थिति तेरो वचनहरूमा, व्यवहारमा, कामहरूमा छैन भने, र मनको धारणाहरूमा अनि सिद्धान्त तथा नियमहरूमा रहदै, तँ आफै मबाट टाढा भाग्छस् र आफैसँग जिउँछस् भने, तब त्यो तैँले पापहरूमा मन बसालेको प्रमाण हो। अर्को शब्दमा भनौं भने, अरुले तेरो स्वलाई नोक्सान पुऱ्याउन वा तेरो प्राणलाई थोरै भएपनि चोट पुऱ्याउन नदिईकन, तँ आफ्नो पुरानै व्यक्तित्वमा अडिएका छस्। यस्ता काम गर्ने व्यक्तिहरू कमजोर क्षमता भएकाहरू अनि अमिल्दाहरू हुन्छन् अनि तिनीहरूले परमेश्‍वरको अनुग्रह देख्न वा उहाँको आशिषहरू चिन्न सक्दैनन्। यदि तैँले कुटिलतासाथ व्यवहार गर्न लागिरह्यौ भने, तब कहिले तैँले मलाई तिमीभित्र काम गर्न दिनेछस्? मैले बोल्न सिध्याए पश्चात, तैँले सुन्नु त सुनिस्, तर केही पनि हासिल गर्न सकिनस्, अनि जब जब तेरा समस्याहरूलाई यथार्थ रुपमा इंगित गरिन्छ, तब तँविशेष रुपमा कमजोर हुन्छस्। त्यो कस्तो किसिमको कद हो? यदि तँलाई सधै ख़ुशी पार्नुपर्ने हो भने, तँलाई मैले कहिले पूर्ण बनाउन सक्ने त? यदि तँउतारचडाउहरूसँग भयभित हुन्छस् भने, तब अरुहरूलाई चेतावनी दिन तँ निस्किनुपर्छ, “म कसैलाई पनि मसँग निराकरण गर्न दिनेछैन, म आफैले मेरो स्वभाविक, पुरानो स्वभावबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सक्नेछु।” यसरी कसैले पनि तेरो निन्दा गर्न वा तँलाई छुन सक्नेछैन अनि कसैले तेरो वास्ता नगरीकन, तैँले आफ्नो इच्छा अनुसार विश्‍वास गर्न सक्नेछस्। के यसप्रकार तैँले मेरा पाइलाहरू पछ्याउनसक्छस्? म तेरो परमेश्‍वर र प्रभू हुँ भन्ने निश्चयतापूर्वक दाबी गर्नु केवल खोक्रो शब्दहरू मात्रै हो। यदि तँ साँच्चैनै शंकाविहीन थियौ भने, यी कुराहरू समस्या हुने थिएन, अनि तँमा परमेश्‍वरको प्रेम र आशिष आएको छ भन्ने तैँले विश्‍वास गर्ने थिइस्। जब म बोल्छु, यी मेरा पुत्रहरूका निम्ति हुन् अनि मेरा वचनहरू धन्यवाद र प्रशंसाका साथ ग्रहण गरिनुपर्छ।